Youtube-dl: သင်မသိကောင်းသိနိုင်သောအချက်များ | Linux မှ
YouTube မှဗွီဒီယိုများကူးယူရန်ကိရိယာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ Windows, Android, iPhone နှင့် Blackberry အသုံးပြုသူများသည် tubemate အားအခမဲ့နှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့ရယူနိုင်သည် GNU / Linux များ ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာများ (အကောင်းဆုံးမဟုတ်လျှင်) တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့သိသည် YouTube ကို အတိအကျပါ youtube က-dlterminal ကို ဖြတ်၍ လျှောက်သွားသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမဆုံးအချက်ကတော့ဖြန့်ဖြူးမှုအများစုမှာတွေ့နိုင်တဲ့ဒီကိရိယာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာသိဖို့ဖြစ်တယ်။ ၎င်း၏အခြေခံအသုံးပြုမှုမှာ -
သို့သော်သတိထားပါ၊ (ဤတွင်ပထမဆုံးအသေးစိတ်လာသည်) YouTube နှင့်သာအလုပ်လုပ်ရုံသာမက၊ ကျယ်ပြန့်သောစာရင်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဆိုက်များအပါအဝင်ဗွီဒီယိုများကိုကူးယူနိုင်သည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအကြောင်း။
ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်ဤကိရိယာကို update လုပ်ရန် command ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့ repositories ကနေကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရင်ဒီပိုစတာကိုရလိမ့်မယ်။
youtube-dl ကို package manager, pip, setup.py (သို့) tarball တစ်ခုတပ်ဆင်ထားပုံရသည်။ ဒါကိုမွမ်းမံရန်အသုံးပြုပါ။
ဗီဒီယိုများကိုရရှိနိုင်သည့်ပုံစံအားလုံး၌လည်း download လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် –all-format option ကိုအသုံးပြုသည်။
ဗွီဒီယိုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ download လုပ်လိုပါက –format ရွေးစရာကိုအသုံးပြုသည်။
37 - mp4 [1080x1920] 46 - webm [1080x1920] 22 - mp4 [720x1280] 45 - ဝဘ် [720x1280] 35 - flv [480x854] 44 - ဝက်ဘ် [480x854] 34 - flv [360x640] 18 - mp4 [360x640] 43 - webm [360x640]5- flv [240x400] 17 - mp4 [144x176]
ငါတို့သည်လည်းဗီဒီယိုများစာရင်းကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုစာသားစာရွက်စာတမ်း၌ထားနှင့် execute:
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် proxy server ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင် –proxy URL parameter ဖြင့်ဗီဒီယိုများကူးယူနိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုအချို့ရှိပါတယ်။
-i ဖြေ - download ချတဲ့အမှားတွေဖြစ်တဲ့အခါ၊ ဥပမာ - playlist စာရင်းထဲမှာမရရှိနိုင်တဲ့ဗွီဒီယိုကိုကျော်သွားတယ်။
-ရှေ့ဆက်အမှား ဖြေ - အကယ်လို့အမှားအယွင်းရှိရင် (playlist (သို့) command line ထဲမှာ) ဗွီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်ချတာကိုရပ်လိုက်ပါ
--dump-user- အေးဂျင့် : လက်ရှိဘရောက်ဇာကိုပြပါ
--user- အေးဂျင့် UA : တစ် ဦး ထုံးစံအသုံးပြုသူအေးဂျင့်ကိုသတ်မှတ်
--no-check- လက်မှတ် : HTTPS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုဖိနှိပ်သည်။
--playlist- start NUMBER ဖြေ - playlist တစ်ခုကို download လုပ်ပါ။
-စာရင်း-အဆုံး NUMBER ဖြေ - playlist တစ်ခုကို download လုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးနံပါတ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်စတင်သည်။
-ဖိုင်အရွယ်အစားကို SIZE - SIZE တန်ဖိုးထက်သေးငယ်သောမည်သည့်ဗွီဒီယိုကိုမဆို download မလုပ်ပါနှင့် (ဥပမာ 50k or 44.6m)
-ဖိုင်ဆိုဒ်ကို SIZE - SIZE တန်ဖိုးထက်ပိုသောမည်သည့်ဗွီဒီယိုကိုမဆိုမ download လုပ်ပါ (ဥပမာ 50k or 44.6m)
- နေ့စွဲရက်စွဲ ဖြေ - တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တစ်ခုမှာပဲကူးယူပါ။
နေ့စွဲ --datebefore - သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မတိုင်ခင် (သို့) နေ့ရက်ကာလမှာဗွီဒီယိုတွေကိုကူးယူပါ
- နေ့စွဲနေ့စွဲ - သတ်မှတ်ထားသောရက်အနည်းငယ်အတွင်းသို့မဟုတ်ပေါ်မှဗီဒီယိုများကူးယူပါ။
-မိနစ်-ကြည့်ရှုမှု COUNT - X ကိုထက်နည်းသောမြင်တွေ့မှုအရေအတွက်နှင့်အတူဗွီဒီယိုများကိုမကူးပါနှင့်
-max-views COUNT ။ X ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အကြိမ်အရေအတွက်နှင့်ဗွီဒီယိုများမကူးပါနှင့်
--rate-limit limit အမြန်ဆုံး download speed ကို bytes ဖြင့်ကန့်သတ်ပါ။ (ဥပမာ 50K or 4.2M)
- ပြန်လည်နှုတ်ယူသည် ပြန်လည်ပတ်မှုအရေအတွက် (ပုံမှန်အတိုင်း ၁၀)
ကောင်းပြီသင် Youybe-dl ကိုအသုံးမပြုလိုလျှင်၊ သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက TubeMateသို့မဟုတ်အခြားအလားတူ application များအတွက် Android အတွက်ထပ်တူပြုရန်များစွာရှိသည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Youtube-dl: သင်မသိဘူးသောသိကောင်းစရာများ
youtube-dl 1080p ဗွီဒီယိုများကို YouTube မှပြန်လည် download ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ရွေးစရာများကိုကြိုးစားပြီး me ပြောပြပါ
Buuu အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မလိုချင်သည်ကို၎င်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဟားဟား .. ဗြဟ္မဏအဆင့် ၁၀
မဟုတ်ပါ၊ youtube-dl သည် 1080p ဗီဒီယိုများ (အသံဖြင့်) YouTube မှမကူးယူနိုင်သေးပါ။ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ် Rayonant ဖော်ပြသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်အလွန်ပျင်းရိပါသည်။
1080p YouTube ဗီဒီယိုများအတွက် Clipgrab ကိုဆက်လက်အသုံးပြုမည် (namesake Yoyo308 ကအကြံပြုသည်)၊ 720p ဗီဒီယိုများနှင့် youtube-dl ကိုပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုမည်။
ငါတတ်နိုင်သလောက်တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကဗွီဒီယိုနဲ့အသံတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမယ်။ ပြီးတော့ script က ffmpeg or avconv နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်ပါ။ http://www.webupd8.org/2014/02/video-downloader-youtube-dl-gets.html အနည်းဆုံးတော့ဒါကကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုမှ လွဲ၍ ကျွန်တော်မကြိုးစားခဲ့ပါ။
နောက်ထပ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာမှာ Clipgrab ဖြစ်သည်
ငါသူ့ကိုမသိဘူး .. ရှာဖွေတယ်
ငါအဲဒါကိုစမ်းသပ်ပြီး Windows အတွက်ရတယ်။
ငါရှေ့က youtube-dl ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က၊ Ruby နဲ့ GTK + မှာငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဇာတ်ညွှန်းတပ်ဆင်ပုံနဲ့လုပ်ဆောင်ပုံကိုပြတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထားခဲ့တယ်။ 🙂 http://youtu.be/_OTnGz49If0 ပတ်သတ်ပြီး
sudo apt-get ကို install youtube-dlg
ပျက်ကွက်လျှင်> apt-get -f ကိုထည့်သွင်းပါ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Debian ဖြင့်စမ်းသပ်ပါမည်
ကျွန်တော့်မသိမှုအတွက်စိတ်မကောင်းပေမယ့်ဒီကိရိယာကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားမသိခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကငါ့အတွက်ပိုက်လုံးပဲ။ elav (နှင့် DesdeLinux မှလူအားလုံး) ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဝင်တိုင်းငါတစ်ခုခုသင်ယူတယ်။
ငါ Clipgrab ကိုသုံးတယ်၊ အဲဒါမတိုင်ခင်က YouTube ကိုသုံးခဲ့ပေမဲ့ဘာကြောင့်အလုပ်မဖြစ်တော့တာလဲမသိဘူး။
Orale၊ နောက်တစ်ခါအလုပ်လုပ်တာကောင်းတယ်၊ အဲဒါကိုငါမသုံးခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိဘူး၊ ငါ Clipgrab ကိုလည်းအရမ်းသုံးတယ်။ မင်္ဂလာပါ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကဖော်ပြရန်သာလိုအပ်ပေမယ်အသံနှင့် / သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုသာဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေပါဝင်သည်သော -F နှင့်အတူပြုသောအမှုရရှိနိုင်သော download လုပ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာ, ကြည့်ရှုရန်။
vinsuk ပါ ဟုသူကပြောသည်
Co @ # $% ^ &, ဤအကြံပြုချက်များကိုပိုမိုစဉ်းစားသင့်သည်, သူတို့မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သည်: -B
အသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် youtube-dl-gui ဖြင့်အသုံးပြုသော်လည်းအလွန်ကောင်းသည့်အစီအစဉ်။
ကောင်းသောအကြံပေးချက်များ! အကောင်းဆုံးအသံအရည်အသွေးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမအသံကမကောင်းဘူး။ အခုတော့ဒီ option ကဘာလဲဆိုတာ -quality of တစ်ခုခုကိုမမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒီမှာဒီမှာ install လုပ်ထားတာမရှိဘူး။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အသံအတွက် txt ကိုစာရင်းပြုစုပါက၎င်းသည်၎င်းအားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဒေါင်းလုပ်ချနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသလား။
Adolfo Rojas, G ဟုသူကပြောသည်
yaw-dl မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ multi-format နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ အရမ်းကောင်းတယ်။
Adolfo Rojas G ကိုပြန်ပြောပါ
youtube-dl သည်ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စာရေးသူ (elav) (သို့) စာဖတ်သူများ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအားဗီဒီယို streaming နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန်အခွင့်အရေးယူသည်။ သူတို့ကို download လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ဥပမာ avconv -i "http://hotasp.v.cntv.cn/asp/hls/main/3a/8/default/bdb0303000f3c4c9bbcc2818646b3b5898ed/main.m257u6" -c copy -bsf:aa out.mkv aac_adtstoasc
သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းအမှားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ (stream 1: 187221> = 187200 in 100 တွင် muxer သို့ dts တိုး။ မတိုး) နှင့် download ကိုပယ်ဖျက်သည်။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာဗီဒီယိုအားလုံးကိုကြည့်ပြီး၎င်းတို့သည် load လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖြစ်သည်။ ဆိုပါစို့ - XNUMX_parts.ts၊ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို download လုပ်ပြီးသူတို့ကို cat: .ts> video_ts_unidos.mkv နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
မှတ်ချက်: avconv (၎င်းသည် ffmpeg ဗားရှင်းအသစ်) 。。。。。အကူအညီ！ PLEASE LE
၎င်းတို့သည်ထည့် ၀ င်ပါကအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်များကိုဖျက်ရမည်နည်း။
မင်းရဲ့လိမ္မော်ရောင်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မဖျက်ပါ၊ DesdeLinux- ဗမာအဘိဓါန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
ok စိတ်မကောင်းပါဘူး: D ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ugo Yak ပါ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ပို့စ်ကအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားပါကအောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်။
စာသားဖိုင်ကို အသုံးပြု၍ ဗီဒီယိုစာရင်းတစ်ခုကိုကူးယူရန်ကြိုးစားသောအခါအသုံးပြုသင့်သောပုံစံမှာ -
မဟုတ်ရင် site မှ playlist တစ်ခုလုံးကို download လုပ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည် (sooooo videos များစွာ!)
မွတ္စု: စာသားဖိုင်တွင် URL တစ်ခုစီကိုမှန်ကန်စွာဖတ်နိုင်ရန်အတွက်ကွဲပြားသောလိုင်းတစ်ခုတွင်နေရာချထားရန်လုံလောက်သည်။
Ugo Yak သို့ပြန်သွားရန်
ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မလား .mp3 format နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမသိဘူးလား။ ဆိုလိုတာကဗီဒီယိုတွေရဲ့အသံပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်တယ်၊ ဓာတ်ပုံနံပါတ် ၁၄၁ ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ mp141 မှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကအခြားအသံ format တစ်ခုဖြစ်တယ်။
စကားမစပ်, youtube-dl ကို Windows တွင်ရနိုင်သည်။
ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခု။ သင်သတိပြုချင်သည်မှာသင် Desktop ပရိုဂရမ်များ jdownloader သည်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်သင်အကြိုက်ဆုံး browser များဖြစ်သော chromium သို့မဟုတ် firefox အတွက် plugins ကိုသုံးနိုင်သည်။ 🙂
4kdownload.com ရှိရှေးရှေးများ၏အသုံးအဆောင်များသည်အလွန်ကောင်းသည်။ Ubuntu အတွက် packets တွေပဲရှိပုံရပေမယ့် 'portable' နဲ့ unzip 'version တွေကို download လုပ်ရင် program ကိုဖွင့်ဖို့ ".sh" ရှိတယ်။ Fedora ကငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ် ဗွီဒီယိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းတွင် graphical environment ကိုယ်တိုင်သည်ရရှိနိုင်သော formats နှင့်အရည်အသွေးအားလုံးကိုဖော်ပြသည်။
Youtube-dl DownLoadHelper ၏ addnons သည်ကျွန်ုပ်ကိုမအောင်မြင်သည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
သင် youtube-dl အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါကယခုအခါ "single quotes" ကြားရှိ URL ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့် download ပြုလုပ်နိုင်သည်။
[statick @ AcerV5 ဗီဒီယိုများ] $ youtube-dl -f mp4 « https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=so08FLD4Ck4 »
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီပရိုဂရမ်ကကျွန်တော့်စက်ကိုအေးခဲစေပြီးမည်သည့်ဗွီဒီယိုကိုမှဒေါင်းလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ဆိုလိုတာက (youtube.dl) အခြားသူများကိုထပ်မံဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှားယွင်းသောသတင်းတစ်ခုရရှိပြီး၊ မက်ဆေ့ခ်ျများများလွန်းလျှင်ပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်လာသည် အကြိမ်ကြိမ်နှင့်အမှားပြတင်းပေါက်များကိုပိတ်လိုက်လျှင်ပင်စက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအေးခဲစေသည်။ အကြောင်းရင်းကဘာလဲ၊ ဘာ command ကငါ့ကိုကူညီနိုင်လဲလို့ငါ့ကိုပြောပြလို့ရမလား။ အခုမှစပြီး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တထောင်။
ငါ Raspberry Pi ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ အမှန်တရားကငါသာကစားနိုင်အောင်သုံးထားတယ်။ youtube ကနေ PLAYLISTS ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။ အဆင့်မြင့် youtube-dl ရွေးစရာများအထူးသဖြင့်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
မိနစ် ၁:၃၃ မှာစပြီး ၁း၁၃ မှာအဆုံးသတ်တဲ့ဖိုင်တစ်ပုဒ်လုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ့်အစားဗီဒီယိုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲ။
ဤဆောင်းပါးသည်နှစ်အနည်းငယ်သာရှိသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် "ဂူဂဲလ် - အခမဲ့" ကိရိယာများအတွက်သင့်လျော်သောအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိမ့်မည်။
ဟယ်လို!! ဗွီဒီယိုအပြည့်အစားဗွီဒီယိုအပိုင်းများကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်မလားသင်သိပါသလား။ သင် YT ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ဖြတ်၍ သင် download လုပ်နိုင်သည့်မည်သည့် tool ကိုမဆိုမည်သည့် website ကိုမဆိုငါရှာ။ မရပါ။ အရင်က YTcutter ရှိခဲ့ပေမယ့် ၆ လလောက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ။ ။ သင်၏စတိုးဆိုင်တွင်ဖြတ်တောက်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားအဖြေတစ်ခုကိုမည်သူမဆိုသိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!
MAC Address: ၎င်းသည်ဘာလဲနှင့်၎င်းကို Linux မှမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်